just listed(just listed) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
नेप्सेमा प्रभु बैंकको बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा आज बुधबार १ करोड बढी कित्ता सेयर थपिएको छ। नेप्सेमा प्रभु बैंकको बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो। यो बैंकले सेयरधनीहरुलाई वितरण गरेको १ करोड ३ लाख १५ हजार ५०६.६४ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ। प्रभु बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई कुल १०.५२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ। जसमा १०...
नेप्सेमा थपियो पौने ५४ लाख कित्ता सेयर
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा आज झन्डै पौने ५४ लाख कित्ता थपिएको छ। नेप्सेमा नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेडको बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो। यो बैंकको ५३ लाख ७३ हजार ७२३.३३ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ। यो बैंक गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ६ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको थियो। ...
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा मन्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ। नेप्सेमा मन्जुश्री फाइनान्सको १४ लाख ७२ हजार ६३६.२७४६ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो। यो फाइनान्सले गत आर्थिक वर्षका लागि कुल २३.५ प्रतिशत लाभांश बाँडेको थियो। जसमा १८ प्रतिशत बोनस सेयर र बाँकी ५.५ प्रतिशत नगद लाभांश रहेका थिए। ...
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको बोनस सेयर पनि सूचीकृत भएको छ। नेप्सेमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको कुल ६३ लाख २१ हजार ९२.५५ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो। जसमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ५६ लाख ८ हजार १.४७ कित्ता र...
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) आज एकैदिन दुई वाणिज्य बैंकका पौने ३ करोड बढी कित्ता बोनस सेयर थपिएका छन्। नेप्सेमा आज कृषि विकास बैंक र मेगा बैंक नेपालका कुल २ करोड ७६ लाख ५७ हजार ३८६.४६२४ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएका हुन्। सूचीकृत बोनस सेयरमध्ये कृषि विकास बैंकको १ करोड ४३ लाख ३४ हजार ६९१.०४६४ कित्ता र मेगा बैंकको १ करोड ३३ लाख २२...
नेप्सेमा दुई लघुवित्तका पौने १२ लाख बढी कित्ता बोनस सयर सूचीकृत
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा आज दुई लघुवित्त संस्थाको पौने १२ लाख बढी कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएका छन्। नेप्सेमा वोमी र आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका ११ लाख ८१ हजार ९७६ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएका हुन्। जसमा वामी लघुवित्तको ८ लाख ३३ हजार ५४४ कित्ता र आशा लघुवित्तको ३ लाख ४८ हजार ४३२ कित्ता बोनस सेयर छन्। गत...
दुई कम्पनीका बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत, कुन–कुनको ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा आज दुई कम्पनीको ११ लाख ६० हजार बढी कित्ता थपिएको छ। नेप्सेमा आईसीएफसी फाइनान्स र स्पर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका बोनस सेयरहरु सूचीकृत भएका छन्। आईसीएफसी फाइनान्सले आफ्ना सेयरधनीहरुका लागि जारी गरेको कुल ९ लाख ७७ हजार ६३८ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ। यो कम्पनीको �...
नेप्सेमा थपियो दुई कम्पनीको ५८ लाख बढी कित्ता सेयर
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा आज दुई कम्पनीका ५८ लाख बढी कित्ता सेयर थपिएका छन्। नेप्सेमा एभरेस्ट बैंक र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका ५८ लाख १६ हजार ३५६.४२ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो। नेप्सेमा एभरेस्ट बैंकको ४२ लाख ३५ हजार १०३.४२ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ। बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ५ प्रतिशत...
नेप्सेमा थपियो ३ कम्पनीका ८५ लाख बढी कित्ता सेयर
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा आज एकैदिन ८५ लाख कित्ता बढी थपिएका छन्। नेप्सेमा ३ जलविद्युत् कम्पनीका बोनस र हकप्रद सेयर गरी कुल ८५ लाख १ हजार ९३७ कित्ता थपिएका हुन्। नेप्सेमा अपी पावर कम्पनीको ५६ लाख ७० हजार कित्ता हकप्रद सूचीकृत भएको छ। यसैगरी सानिमा हाइड्रोपावर लिमिटेडको १० प्रतिशतले हुन आउने कुल २५ लाख ५३ हजार १००...
नेप्सेमा थपियो एकैदिन ६ कम्पनीका १.०५ करोड कित्ता बोनस सेयर, कुन–कुनको ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा आज ६ वटा कम्पनीका बोनस सेयर सूचीकृत भएका छन्। नेप्सेमा हिमालयन डिस्टिलरीसहित मुक्तिनाथ विकास बैंक, लक्ष्मी लघुवित्त, एनएलजी इन्स्योरेन्स, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर र कामना सेवा विकास बैंकका बोनस सेयरहरु सूचीकृत भएका हुन्। यी कम्पनीका १ करोड ५ लाख कित्ता बढी सेयर सूचीकृत भएका छन्। नेप्सेमा...
नेप्सेमा थपियो करिब सवा १७ लाख कित्ता सेयर
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा आइतबार अपि पावर कम्पनीको करिब सवा १७ लाख कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ। नेप्सेमा यो कम्पनीले जारी गरेको कुल १७ लाख २० हजार ५६१.५० कित्ता बोन सेयर सूचीकृत भएको हो। यो कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि चुक्तापुँजीका कुल ९.४७ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो। जसमा ९ प्रतिशतले हुन आउने...
नेप्सेमा मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको बोनस सेयर सूचीकृत, कति कित्ता ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ। नेप्सेमा बैंकले गत आर्थिक वर्षका लागि सेयरधनीहरुलाई जारी गरेको १० लाख ४० हजार ५६.८७५ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो। बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर जारी गरेको थियो। ...
नेप्सेमा थपियो करिब साढे १३ लाख कित्ता सेयर, कुन कम्पनीको ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा करिब साढे १३ लाख कित्ता सेयर थपिएको छ। नेप्सेमा आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १३ लाख ४८ हजार ९८५.१४ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ। यो लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षका लागि कुल २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो। जसमा १५ प्रतिशतले हुन आउने बोनस सेयर र बाँकी ५ प्रतिशत नगद लाभांश रहेको...
चालु आवमा थप १३ नयाँ कम्पनी नेप्सेमा सूचीकृत, कुन–कुन थपिए ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड(नेप्से) मा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा थप नयाँ १३ कम्पनी सूचीकरण भएका छन्। नेप्सेका अनुसार चालु आवमा अहिलेसम्म थप नयाँ १३ कम्पनी सूचीकृत भएका हुन्। योसँगै हाल नेप्सेमा कुल सूचीकृत संस्थाहरु २१७ पुगेका छन्। नयाँ सूचीकृत संस्थाहरुको सूचीकरण भने अझै बढ्ने क्रममा नै रहेको छ। नेप्सेमा सूचीकृत भएका...
नेप्सेमा एनसीसी बैंकको ९६ लाख बढी कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा आज ९६ लाख कित्ता सेयर थपिएको छ। नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एसीसी) बैंकको कुल ९६ लाख ५ हजार ९९७.३५ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। यो बोनस सेयर बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट चुक्तापुँजीको १०.२७ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ। बैंक गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट कुल १०.८१ प्रतिशत लाभांश...
कालिका लघुवित्तद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस कति?
यो साता सुनको भाउ तोलामै रु. ३२०० ले घट्यो, आज कति हुँदैछ कारोबार ?